မိန်းကလေးတွေက ဘာလို့ ယောက်ျားလေးတွေထက် အိပ်ချိန်ပိုလိုအပ်ရတာလဲ? – Trend.com.mm
မိန်းကလေးတွေက ဘာလို့ ယောက်ျားလေးတွေထက် အိပ်ချိန်ပိုလိုအပ်ရတာလဲ?
Posted on October 31, 2018 by Noel
မိန်းကလေးတွေက ယောက်ျားလေးတွေထက်ပိုပြီးအိပ်ချိန်လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့စကားကိုသင်ကြားဖူးကြမှာပါ။ဒါပေမဲ့ ဘာလို့လိုအပ်ရတာလဲဆိုတာတော့ သိသူရှားပါတယ်။ဒါကြောင့် ကျန်းမာရေးဗဟုသုတအနေနဲ့ မိန်းကလေးတွေဟာ ယောကျာ်းလေးတွေထက် အိပ်ချိန်ပိုပြီးလိုအပ်ရတဲ့အကြောင်းကိုပြန်ပြီးမျှဝေပေးသွားပါမယ်။
National Sleep Foundation ရဲ့အဆိုအရ အသက် ၂၆နှစ်ကနေ အသက် ၆၄ နှစ်အထိလူတွေဟာ တစ်နေ့ကိုအိပ်ချိန် ၇နာရီကနေ ၉နာရီကြားရှိဖို့လိုအပ်ပြီး အသက် ၆၄ နှစ်ကျော်အသက်အရွယ်ကြီးသူတွေကတော့ တစ်နေ့ကို အိပ်ချိန် ၇နာရီကနေ ၈နာရီထိလိုအပ်ပါတယ်။ဆယ်ကျော်သက်တွေဟာဆိုရင် အိပ်ချိန် ၉နာရီကနေ ၁၀နာရီထိလိုအပ်ကြောင်းတွေ့ရှိရပါတယ်။ဒါ့အပြင် ယောက်ျားလေးနဲ့မိန်းကလေးကြားက အိပ်ချိန်ကလည်းကွာခြားပါတယ်။
မိန်းကလေးတွေက ယောက်ျားလေးတွေထက် မိနစ် ၂၀စာလောက်အိပ်ချိန်ပိုလိုအပ်ပါတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ မိန်းကလေးတွေဟာ…
လေ့လာချက်တွေအရ အမျိုးသမီးတွေဟာ ဦးနှောက်စွမ်းရည်ကိုအသုံးချတာများသလို အလုပ်နှစ်ခုသုံးခုတစ်ပြိုင်နက်တည်းလုပ်ဆောင်ကြတာတွေများပါတယ်။ဒါကြောင့် ကုန်ဆုံးသွားတဲ့စွမ်းအင်တွေကို လိုအပ်တာထက် မိနစ်အနည်းငယ်လောက်ပိုပြီးအိပ်စက်ကာ ပြန်လည်ဖြည့်တင်းပေးရမှာပါ။
လေ့လာချက်တွေအရ အမျိုးသမီးတွေဟာ တော်ရုံနဲ့အိပ်မပျော်တတ်ကြလို့ ယောက်ျားလေးတွေအိပ်စက်နေချိန်မှာ မိန်းကလေးတွေကမအိပ်နိုင်သေးပါဘူး။အမျိုးသမီး ၆၃ရာခိုင်နှုန်းဟာ အပတ်တိုင်းအိပ်မပျော်တဲ့ဝေဒနာကို တစ်ကြိမ်မကခံစားရကြောင်းတွေ့ရှိခဲ့ရပါသေးတယ်။ဒါကြောင့် မိန်းကလေးတွေက ယောက်ျားလေးတွေထက်ပိုပြီးအိပ်ချိန်လိုအပ်ကြတာပါ။
အမျိုးသမီးတွေကိုယ်ဝန်ဆောင်ချိန်မှာဟော်မုန်းအပြောင်းအလဲတွေ၊စိတ်ခံစားချက်အပြောင်းအလဲတွေအများကြီးဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဲ့ဒါဟာ အိပ်စက်ချိန်ကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပါတယ်။သက်တောင့်သက်သာမဖြစ်တဲ့အပြင် ခြေထောက်ဖောရောင်တွေ၊မကြာခဏဆီးသွားတတ်တာတွေကြောင့်ပုံမှန်အိပ်စက်ချိန်တူရင်တောင် အမျိုးသမီးတွေက အမျိုးသားတွေထက်ပိုပြီးအိပ်စက်ချိန်လိုအပ်ပါတယ်။မိနစ်အနည်းငယ်စာလောက်ပိုအိပ်ပေးမှလိုအပ်တဲ့အားအင်တွေရရှိစေတာပါ။
မိန်းကလေးတွေဓမ္မတာလာချိန်မှာ စိတ်အပြောင်းအလဲမျိုးစုံဖြစ်သလို ခါးအောက်ပိုင်းတစ်ဝိုက်နာကျင်မှုခံစားရခြင်းကြောင့်အပြည့်အ၀အိပ်စက်အနားမယူနိုင်ကြပါဘူး။ညဘက်ဆိုလည်း တော်ရုံနဲ့အိပ်မပျော်တတ်ပဲ အိပ်မပျော်တဲ့ဝေဒနာကိုခံစားရပါတယ်။မကြာခဏလည်းတရေးနိုးတတ်လို့
အဲ့ဒီအချိန်ကာလတွေမှာသူတို့ရဲ့အိပ်စက်ချိန်က ပုံမှန်မရှိပါဘူး။ဒါကြောင့် မိန်းကလေးတွေက ယောကျာ်းလေးတွေထက်ပိုပြီးအိပ်ပေးဖို့လိုပါတယ်။
*Restless Leg Syndrome ခံစားရတယ်
ညနေပိုင်းနဲ့ညဘက်တွေမှာ ခြေထောက်မှာအကောင်ကိုက်နေသလိုယားယံမှုခံစားရတယ်။ခြေထောက်ကိုလိုသလို ချက်ချင်းမရွေ့လျားနိုင်ဘူး။ဆူးနဲ့ထိုးနေသလိုနာကျင်မှုခံစားရတယ်စတဲ့လက္ခဏာတွေက Restless Leg Syndrome ဝေဒနာပါ။လေ့လာတွေ့ရှိချက်တွေအရ ဒီဝေဒနာကို အမျိုးသမီးတွေကပိုပြီးခံစားကြုံတွေ့ရလေ့ရှိကြောင်းသိရပါတယ်။
*Secondary insomnia ခံစားရတယ်
အမျိုးသမီးတွေဟာ စိတ်ဖိစီးမှု၊စိတ်ဓာတ်ကျဆင်းမှုတွေပိုပြီးခံစားကြုံတွေ့ရတဲ့အတွက် အိပ်စက်ဖို့ခက်ခဲတဲ့ဝေဒနာကိုပါတွဲဖက်ခံစားရပါတယ်။ဒါကြောင့်အမျိုးသမီးတွေဟာ အမျိုးသားတွေထက်အိပ်စက်ချိန်နည်းပါးပါတယ်။အမျိုးသမီးတွေက စိတ်ပင်ပန်းမှုကိုပိုပြီးခံစားရတဲ့အတွက် အမျိုးသားတွေထက် မိနစ် ၂၀စာလောက်ပိုပြီးအိပ်စက်ပေးသင့်ပါတယ်။
အမျိုးသမီးတွေဟာ အိပ်ချိန်ပိုပြီးလိုအပ်တဲ့အပြင် အိပ်ရေးမ၀တဲ့အခါမှာလည်း အမျိုးသားတွေထက်ပိုပြီးဆိုးကျိုးများပါတယ်။လုံလုံလောက်လောက်မအိပ်စက်ရတဲ့အခါ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဝေဒနာတွေ၊ဆီးချိုရောဂါနဲ့ နှလုံးနဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ရောဂါတွေ အဖြစ်များလာပါတယ်။ဒါကြောင့် မိန်းကလေးတွေအနေနဲ့ အိပ်စက်ချိန်လုံလုံလောက်လောက်ရရှိဖို့ စိတ်ဖိစီးတွေတတ်နိုင်သလောက်လျှော့ကာ စောစောအိပ်စက်တာမျိုး၊ကောင်းကောင်းအိပ်ပျော်စေမယ့်အစားအစာ၊လေ့ကျင့်ခန်းမျိုးလုပ်ပေးပါလို့ အကြံပြုတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။
မိနျးကလေးတှကေ ဘာလို့ယောကျြားလေးတှထေကျ အိပျခြိနျပိုလိုအပျရတာလဲ?
မိနျးကလေးတှကေ ယောကျြားလေးတှထေကျပိုပွီးအိပျခြိနျလိုအပျတယျဆိုတဲ့စကားကိုသငျကွားဖူးကွမှာပါ။ဒါပမေဲ့ ဘာလို့လိုအပျရတာလဲဆိုတာတော့ သိသူရှားပါတယျ။ဒါကွောငျ့ ကနျြးမာရေးဗဟုသုတအနနေဲ့ မိနျးကလေးတှဟော ယောကျြားလေးတှထေကျ အိပျခြိနျပိုပွီးလိုအပျရတဲ့အကွောငျးကိုပွနျပွီးမြှဝပေေးသှားပါမယျ။
National Sleep Foundation ရဲ့အဆိုအရ အသကျ ၂၆နှဈကနေ အသကျ ၆၄ နှဈအထိလူတှဟော တဈနကေို့အိပျခြိနျ ရနာရီကနေ ၉နာရီကွားရှိဖို့လိုအပျပွီး အသကျ ၆၄ နှဈကြျောအသကျအရှယျကွီးသူတှကေတော့ တဈနကေို့ အိပျခြိနျ ရနာရီကနေ ၈နာရီထိလိုအပျပါတယျ။ဆယျကြျောသကျတှဟောဆိုရငျ အိပျခြိနျ ၉နာရီကနေ ၁ဝနာရီထိလိုအပျကွောငျးတှရှေိ့ရပါတယျ။ဒါ့အပွငျ ယောကျြားလေးနဲ့မိနျးကလေးကွားက အိပျခြိနျကလညျးကှာခွားပါတယျ။
မိနျးကလေးတှကေ ယောကျြားလေးတှထေကျ မိနဈ ၂ဝစာလောကျအိပျခြိနျပိုလိုအပျပါတယျ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ မိနျးကလေးတှဟော…
လလေ့ာခကျြတှအေရ အမြိုးသမီးတှဟော ဦးနှောကျစှမျးရညျကိုအသုံးခတြာမြားသလို အလုပျနှဈခုသုံးခုတဈပွိုငျနကျတညျးလုပျဆောငျကွတာတှမြေားပါတယျ။ဒါကွောငျ့ ကုနျဆုံးသှားတဲ့စှမျးအငျတှကေို လိုအပျတာထကျ မိနဈအနညျးငယျလောကျပိုပွီးအိပျစကျကာ ပွနျလညျဖွညျ့တငျးပေးရမှာပါ။
လလေ့ာခကျြတှအေရ အမြိုးသမီးတှဟော တျောရုံနဲ့အိပျမပြျောတတျကွလို့ ယောကျြားလေးတှအေိပျစကျနခြေိနျမှာ မိနျးကလေးတှကေမအိပျနိုငျသေးပါဘူး။အမြိုးသမီး ၆၃ရာခိုငျနှုနျးဟာ အပတျတိုငျးအိပျမပြျောတဲ့ဝဒေနာကို တဈကွိမျမကခံစားရကွောငျးတှရှေိ့ခဲ့ရပါသေးတယျ။ဒါကွောငျ့ မိနျးကလေးတှကေ ယောကျြားလေးတှထေကျပိုပွီးအိပျခြိနျလိုအပျကွတာပါ။
အမြိုးသမီးတှကေိုယျဝနျဆောငျခြိနျမှာဟျောမုနျးအပွောငျးအလဲတှေ၊စိတျခံစားခကျြအပွောငျးအလဲတှအေမြားကွီးဖွဈတတျပါတယျ။အဲ့ဒါဟာ အိပျစကျခြိနျကို အနှောငျ့အယှကျဖွဈစပေါတယျ။သကျတောငျ့သကျသာမဖွဈတဲ့အပွငျ ခွထေောကျဖောရောငျတှေ၊မကွာခဏဆီးသှားတတျတာတှကွေောငျ့ပုံမှနျအိပျစကျခြိနျတူရငျတောငျ အမြိုးသမီးတှကေ အမြိုးသားတှထေကျပိုပွီးအိပျစကျခြိနျလိုအပျပါတယျ။မိနဈအနညျးငယျစာလောကျပိုအိပျပေးမှလိုအပျတဲ့အားအငျတှရေရှိစတောပါ။
မိနျးကလေးတှဓေမ်မတာလာခြိနျမှာ စိတျအပွောငျးအလဲမြိုးစုံဖွဈသလို ခါးအောကျပိုငျးတဈဝိုကျနာကငျြမှုခံစားရခွငျးကွောငျ့အပွညျ့အဝအိပျစကျအနားမယူနိုငျကွပါဘူး။ညဘကျဆိုလညျး တျောရုံနဲ့အိပျမပြျောတတျပဲ အိပျမပြျောတဲ့ဝဒေနာကိုခံစားရပါတယျ။မကွာခဏလညျးတရေးနိုးတတျလို့
အဲ့ဒီအခြိနျကာလတှမှောသူတို့ရဲ့အိပျစကျခြိနျက ပုံမှနျမရှိပါဘူး။ဒါကွောငျ့ မိနျးကလေးတှကေ ယောကျြားလေးတှထေကျပိုပွီးအိပျပေးဖို့လိုပါတယျ။
*Restless Leg Syndrome ခံစားရတယျ
ညနပေိုငျးနဲ့ညဘကျတှမှော ခွထေောကျမှာအကောငျကိုကျနသေလိုယားယံမှုခံစားရတယျ။ခွထေောကျကိုလိုသလို ခကျြခငျြးမရှလြေ့ားနိုငျဘူး။ဆူးနဲ့ထိုးနသေလိုနာကငျြမှုခံစားရတယျစတဲ့လက်ခဏာတှကေ Restless Leg Syndrome ဝဒေနာပါ။လလေ့ာတှရှေိ့ခကျြတှအေရ ဒီဝဒေနာကို အမြိုးသမီးတှကေပိုပွီးခံစားကွုံတှရေ့လရှေိ့ကွောငျးသိရပါတယျ။
*Secondary insomnia ခံစားရတယျ
အမြိုးသမီးတှဟော စိတျဖိစီးမှု၊စိတျဓာတျကဆြငျးမှုတှပေိုပွီးခံစားကွုံတှရေ့တဲ့အတှကျ အိပျစကျဖို့ခကျခဲတဲ့ဝဒေနာကိုပါတှဲဖကျခံစားရပါတယျ။ဒါကွောငျ့အမြိုးသမီးတှဟော အမြိုးသားတှထေကျအိပျစကျခြိနျနညျးပါးပါတယျ။အမြိုးသမီးတှကေ စိတျပငျပနျးမှုကိုပိုပွီးခံစားရတဲ့အတှကျ အမြိုးသားတှထေကျ မိနဈ ၂ဝစာလောကျပိုပွီးအိပျစကျပေးသငျ့ပါတယျ။
အမြိုးသမီးတှဟော အိပျခြိနျပိုပွီးလိုအပျတဲ့အပွငျ အိပျရေးမဝတဲ့အခါမှာလညျး အမြိုးသားတှထေကျပိုပွီးဆိုးကြိုးမြားပါတယျ။လုံလုံလောကျလောကျမအိပျစကျရတဲ့အခါ စိတျပိုငျးဆိုငျရာဝဒေနာတှေ၊ဆီးခြိုရောဂါနဲ့ နှလုံးနဲ့သကျဆိုငျတဲ့ရောဂါတှေ အဖွဈမြားလာပါတယျ။ဒါကွောငျ့ မိနျးကလေးတှအေနနေဲ့ အိပျစကျခြိနျလုံလုံလောကျလောကျရရှိဖို့ စိတျဖိစီးတှတေတျနိုငျသလောကျလြှော့ကာ စောစောအိပျစကျတာမြိုး၊ကောငျးကောငျးအိပျပြျောစမေယျ့အစားအစာ၊လကေ့ငျြ့ခနျးမြိုးလုပျပေးပါလို့ အကွံပွုတိုကျတှနျးလိုကျပါတယျ။
Pre-Order နဲ့တင် အရောင်းရဆုံးစံချိန်ချိုးသွားပြန်တဲ့ EXO